Onye na -emepụta ebe nrụpụta nri na -anaghị akwụ ájá kacha mma | Keyuan
Ọrụ na-enweghị uzuzu, nri akpa mechiri emechi na nnyefe pipelinet.
Mgbe obere akpa akpa ga -adị n'akpa ma wụnye ya na usoro na -esote, ọ ga -adị mkpa ka ejiri aka kpachie ya, mgbe etinyere ya na sistemụ, ájá ihe a na -emepụta n'oge nri na -anakọta site na onye na -anakọta uzuzu. Ihe na -agafe nyocha ihuenyo, ụgbụ ahụ nwere ike igbochi nnukwu ihe na ahụ ndị mba ọzọ, iji hụ na ụmụ irighiri ihe ahụ chọrọ. Usoro a dabara maka ọgwụ, A na-etinye obere akpa na obere akpa na kemịkalụ na ụlọ ọrụ nri, kpuchie ya na ibudata ya, ọkachasị maka ihe nwere agagharị agagharị, Nri na nyocha, ịkwapu n'ihi ọrụ nke onye na-anakọta uzuzu uzuzu, nwere ike zere ájá ihe dị ebe niile na -efe efe.
Site na mpempe akwụkwọ na-ewepụta akwụkwọ ntuziaka, ikpo okwu ụdị nri nrụgide, n'okpuru ebe nchekwa, ihuenyo nchekwa, sistemụ nzacha, sistemụ mkpofu uzuzu, sistemụ ikuku azụ na ihe ndị ọzọ. (Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị).
Ojiji mwepụ uzuzu na ụdị nhazi ụdị nri nri nwere ike nweta usoro nri akwụkwọ ntuziaka na -enweghị efufu uzuzu, Mgbe ịtọpụsịrị ihe n'ime tebụl nri n'ime cone, juputara uzuzu na usoro ijupụta site na nrụgide na -adịghị mma.
A na -ekesa ikuku ikuku, wee kpochie ya site na ihe nzacha, na ikuku dị ọcha na -agbapụta site na onye ofufe n'ime ihe nzacha;
N'ime usoro ọrụ nke sistemụ, mgbasa ozi nke ihe nzacha na ihe ahụ ga -eduga na mmụba nke nguzogide nzacha, yabụ ọ dị mkpa ka a nakwere ya, a na -eji mgbanye mgbali elu dị elu iji tụgharịa ihe nzacha, nke chọrọ ka ejiri aka wepụta ya ka oge ọrụ gachara, aka valvụ aka maka ịpị azụ (n'aka nri maka ịfụ azụ, anọpụ iche n'etiti, n'aka ekpe emechiri) iji belata ma ọ bụ doo anya, na mgbakwunye na ihe mgbasa ozi dị n'elu , a na -edebe nguzogide nke onye na -akwado ya n'ime oke ohere.
Usoro a dabara maka ọgwụ, kemịkal dị mma, ụlọ ọrụ nri, ihe na obere na obere akpa, nyocha na ibudata.
Mgbe ahụ, a na -atụba akpa akpa ahụ ka ọ tọgbọ chakoo, ihe mkpuchi nwere ike igbochi ihe ahụ iji gbochie nnukwu ihe na ihe mba ọzọ. ike ndọda.na enwere ike jikọta ya na akụrụngwa na-ebuga ya site na ọkpọkọ na-echebe na ala iji rụpụta ihe n'ụzọ dị mma. site na mgbanye ikuku mgbaghari ọzọ, na uzuzu dị ọcha na -alaghachi azụ n'ime hopper maka inye nri na -akwụsịghị akwụsị.
Ọdịdị dị mfe, ọrụ nchekwa na adaba, dị mfe ilekọta:
Ọrụ na-enweghị uzuzu, inye nri akpa mechiri emechi na mbufe pipelinet;
Enweghị atụmatụ akụkụ akụkụ nwụrụ anwụ, dị mfe ihicha;
Sistemu mkpokọta akpaaka iji gbochie uzuzu ife efe ma melite gburugburu ọrụ;
Nkọwa dị iche iche nke ọdụ oghere akpa nwere ike izute usoro nhazi dị iche iche;
Ọ dabara na ụlọ ọrụ niile metụtara ọgwụ, nri. Kemịkal, batrị, wdg.
Nke gara aga: Moveable ndoli -eweli igwe
Ebe Ntanye Nri n'efu
Onye na -eri nri agụụ